Wamkelekile kwiJungle nguGuns N 'Roses - Izinto Zobugcisa
Wamkelekile kwiJungle nguGuns N 'Roses
Le ngoma imalunga neLos Angeles. Iveza icala elimnyama lesixeko abantu abaninzi abadibana nabo xa besiya apho ukuya kufuna udumo. Imipu N 'Roses yayilazi kakuhle eli cala lesixeko: ngo-1985, babehlala kwindawo eSunset Boulevard eLos Angeles ababayibiza ngokuba yi-'Hell House.' Indlu yayihlala igcwele iziyobisi, utywala kunye neqela.
U-Axl Rose wabhala la mazwi xa wayese Seattle, emnika umbono malunga nobukhulu beLos Angeles.
Slash (ukusuka kumanqaku ukuya kwi Imipu N 'Roses: IiHits Ndandisendlwini yam kwaye ndinaloo nto yenzekayo kwaye i-Axl yeza kwaye yafumana loo magama kunye, emva koko iqela layilungisa. Sinamalungiselelo ebhendi iphela, kuba yindlela esisebenza ngayo. Umntu uza nombono kwaye omnye umntu abe negalelo kwaye ngaloo ndlela wonwabile wonke umntu. Oko kwaye kwahlangana ngokukhawuleza okukhulu, oko kwakucwangciswe ngosuku olunye. '
Ngo-2007 Amatye agiqekayo yaqhuba inqaku kwisikhumbuzo seminyaka engama-20 Ukulangazelela Intshabalalo . Bacacisile ukuba amazwi adumileyo ale ngoma avela xa uAxl Rose echithe ubusuku kwisikolo saseQueens ngaphambi kokujoyina iqela. URose wathi: 'Lo mfo umnyama uthe,' Usehlathini! Uya kufa. ''
Kwi-93.1 WIBC FM, isikhululo sikanomathotholo e-Indianapolis, e-Indiana, Jake Query, umhlobo ka-Axle Rose, wanika ingxelo eyahlukileyo, esithi: 'Xa i-Axl Rose ikhwele yaya eLos Angeles, California, kumlenze wokugqibela, umqhubi weloli wamqhuba eLos Angeles, kwaye xa uRose ephuma elorini, umqhubi welori wathi, 'Wamkelekile kwiJungle.'
UAndrew - Indianapolis, IN
Xa oku kwakukhutshwa kungatshatanga ngo-1987, yatshatiswa e-UK kodwa yaphoswa eMelika. Ekugqibeleni yabetha e-US xa baphinda bayikhupha ngo-Okthobha u-1988 emva ' Umntwana wam ositi hit # 1.
Oku kwasetyenziswa kwimovie ka-1988 yeClint Eastwood IChibi eliFileyo , apho iqela lenza i-cameo. Ikwadlala ngokulandelelana kokuvula kwefilimu ka-1989 Yama Kum , malunga nesikolo samabanga aphakamileyo esisedolophini esiguqulwe yinqununu uJoe Clark. Ezinye iifilimu zokusebenzisa ingoma zibandakanya:
Imuvi yeLego Ninjago (2017)
Ungatshata Njani (Ngo-2016)
Le yayiyeyesibini i-UK engatshatanga kunye neyesithathu e-US engatshatanga Ukulangazelela Intshabalalo . Umntu wokuqala ongatshatanga, 'Kulula kakhulu,' yayiyiflop.
Uninzi lweekholeji kunye namaqela ezemidlalo asebenzisa le nto ukoyikisa abachasi kwimidlalo yasekhaya. Ii-Bengincins zeCincinnati zeNFL mhlawumbi zezokuqala. Iqela lebhola ekhatywayo laseNorway uLillestrom SK lisebenzisa le ngoma phambi kwayo yonke imidlalo yasekhaya.
Le yayiyingoma yokuqala Ukulangazelela Intshabalalo , ebangele impikiswano ngenxa yokugquma kwayo, umzobo weerobhothi ekubonakala ukuba udlwengula umntu wasetyhini.
I-albhamu yayiyimpumelelo enkulu, ithengisa iikopi ezizizigidi ezili-18 eMelika ngo-2008, isenza eyona albhamu ithengiswa kakhulu kwimbali kude kube ngo-2018, xa i-RIAA yaqinisekiswa Ukujonga okuBonakalayo ngasemva nguHootie kunye neBlowfish kwizigidi ezingama-21.
U-Slash uphinde warekhoda iinxalenye zakhe zegitare njengoko wayengonelisekanga yimizamo yakhe yokuqala. Ukuvelisa ithoni ekhohlakeleyo kodwa emsulwa, umpu weGuns N 'Roses wasebenzisa i-Les Paul '59 replica efakwe kwiMarshall JCM, encediswa kakhulu nguJack Daniel.
Ividiyo yadutyulwa ePark Plaza kunye ne-450 South La Brea eHollywood. Ividiyo yokuqala yebhendi, yayiphumelele kakhulu, yaphumelela kwi-MTV Video Music Awards ye-1988 yeVidiyo eNtsha yoMculi oMtsha. Imipu N 'Roses idlale ingoma kulo mboniso.
Oku kusetyenziswa kwi-movie ye-2017 UJumanji: Wamkelekile kwiJungle kunye nentlawulo elandelayo, UJumanji: Inqanaba elilandelayo (2019). Iifilimu zibekwe kwihlathi elibonakalayo.
Xa i-Axl isithi 'yinyoka yam,' uchaza umdaniso wakhe odumileyo, awukopa kuRichard Black, owayeyimvumi yeqela iShark Island.
U-Slash washiya iqela ngo-1996, eshiya i-Axl Rose ngokuqinileyo kulawulo. URose ugcine ibhendi ihamba namalungu amatsha kwaye ngo-2001 wangena kwenye imbambano noSlash xa abavelisi be Umnyama Hawk Phantsi Ndifuna ukusebenzisa 'Wamkelekile kwiJungle' kwimovie. Ngokuka-Slash, i-Axl yenqabile ngaphandle kokuba inokuphinda iyirekhode kunye namalungu akhoyo ngoku e-Guns N 'Roses, okuthetha u-Slash kunye nezinye Ukulangazelela Intshabalalo Uluhlu lwalahleko lwaluya kulahleka kwimirhumo.
Ingoma ayizange iyenze ifilimu, ebalisa ibali lokuhlaselwa kakubi kwe-US eMogadishu ngo-1993. Yayiza kusetyenziswa kwindawo apho i-Army Rangers ilungiselela ukuhlaselwa-ebomini bokwenene, ngokwenene Blast ingoma ngaphambi kokuba uphume. Ingoma ayisekho ingoma ethi 'Falling To Pieces' yayisetyenziswa endaweni yayo.
I-Guns N 'Roses yenze isimanga kwi-MTV Video Music Awards apho bayenza khona le ngoma. Ngelo xesha i-Axl Rose yayinguye kuphela ilungu lasekuqaleni kwiqela, kodwa kwakulindelwe kakhulu kwi-albhamu yabo Idemokhrasi yaseTshayina , eyayilindelwe kungekudala. Ialbham Ekugqibeleni yabonakala ngo-2008 .
Le ngoma isetyenziswe kwingoma yomdlalo we Playstation 2 Ubusela obukhulu: San Andreas . I-Axl inika ilizwi kwesinye sezikhululo zikanomathotholo.
Ngo-2007, abakwishumi elivisayo abathathu eBooth Free School eRoxbury, eConnecticut (omnye wabo ungumcoci weefayili), babexakene nenkqubo yeedilesi zikawonke-wonke xa omnye wabo wayecula ezinye iingoma kule ngoma, kubandakanya 'Ulapha ehlathini sana; uza kufa. ' Oku kuye kwaxhalabisa omnye utitshala, owayecinga ukuba sisisongelo, wazivalela eklasini wabiza amapolisa, angena agcina aba bafana bathathu bade bakugqibe ukungavisisani.
Umgca osuka kule ngoma waba yinto encinci yokubamba u-Axl Rose, owaqala ukukhwaza kwisihlwele xa wayesenza kwimiboniso, 'Uyazi ukuba uphi u-f - k!' I-Axl yatsho ngo-2006 xa yayazisa Ababulali kwii-MTV Video Music Awards.
I-Guns N 'Roses ivulelwe iAerosmith ngehlobo lowe-1988, yafikelela kumdlalo owawungoSeptemba 15 kwiPasifiki yase-Pacific eCosta Mesa, eCalifornia. Kulo mboniso wokugqibela, abasebenzi beendlela zeAerosmith babonwabile ngokunxiba iimpahla zegorila kunye nokuzonwabisa ngeqonga xa uG N 'R edlala le ngoma. Konke kwakumnandi, njengoko amaqela ayehamba kakuhle, kunye ne-Axl evakalisa ukuncoma kwakhe iAerosmith kuwo wonke umboniso. Xa u-Aerosmith ethatha inqanaba ngobo busuku, babe ne-Guns N 'Roses bezibandakanya nabo kwi-jam eyandisiweyo ka' Mama Kin, 'ingoma ethi Guns ihlala igqunyiwe.
Ukuphela kokhenketho, iGuns N 'Roses yayiyeyona bhanti ishushu -' Umntwana wam ositi hit # 1 kwiveki ephelileyo ukhenketho.
Izixhobo zikaSlash ziphelele Ukulangazelela Intshabalalo I-albhamu yayiyi-Kris Derrig eyakhiwe ngo-1959 uLes Paul ukuphinda ikatala, kunye ne-SI eqeshiweyo. (eyaziwa ngokuba yi-SIR njengeStock # 36) iMarshall 1959 Superlead Metal Panel eyenziwe nguFrank Levi noGlenn Buckley (esekwe kutshintsho lukaTim Caswell kwiStock # 39).
Esi sandi sithathe i-2016 Super Bowl yentengiso yeTaco Bell Quesalupa ebandakanya umdlali webhola yomnyazi uJames Harden, inkwenkwezi yebhola ekhatywayo uNeymar, umlingisi uGeorge Takei kunye 'neTexas Law Hawk' uBryan Wilson. Kwindawo, sifunda ukuba unyango olumnandi luya kuba lukhulu kuneTinder, iidrones, kwaye mhlawumbi nebhola ekhatywayo.
Oku kwasetyenziswa amatyeli amane kwi IiSimps :
'UBart Unabomama Ababini' (2006)
'Imfono kaHomer' (2005)
'Isibhozo seMisbehavin' (1999)
'Imarge kwiLam' (1993)
I-Axl Rose yayingengomntu wokuqala odumileyo e-Indiana ukubhala i-lyric malunga ne-seedy ye-Los Angeles: Ngo-1981, uVan Halen wakhupha i-'Mean Street ' Isilumkiso esifanelekileyo icwecwe; UDavid Roth uvela eNew Castle, eIndiana, kodwa iqela elenziwa e-LA.
Ndiziva ngathi ndikhuphe ingqondo yam
owacula umqondiso kwindawo yonke uphawu
obhalele andinakunceda ndithandane nawe
ukuba andinakukubetha ngesando
ebaleka entlokweni yam ebaleka entlokweni yam
ngubani oculayo andifuni ukuphulukana nothando lwakho ngobu busuku
awunakuchukumisa le nyundo ye-mc